I-Attic kwi-Villa Giardino
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMattia
I-attic ekhethekileyo emalunga ne-90 yeemitha zesikwere kumgangatho wokuqala we-villa kwindawo yokuhlala ezolileyo yaseConegliano. I-attic ikhanya kakhulu kwaye ifakwe ngokupheleleyo, inezo zonke iinkonzo eziyimfuneko zokuchitha ukuphumla okanye ukuhlala usebenza. Umyezo omkhulu wenza yonke into ibe ntle ngakumbi. Iindawo zokulala ezi-2 kunye nebhedi etofo-tofo yesofa yababini zenza kube lula ukuhlalisa amaqela abahlobo okanye iintsapho ezinkulu. Ukuphosa ilitye ukusuka kwiziko lembali, ukusuka kwiinduli zeProsecco, ukusuka eVenice.
Igadi enkulu, egcinwe kakuhle kwisakhiwo inika ithuba lokuhlala ngaphandle ngeentsuku ezinelanga kwaye ujabulele umoya wokuphumla okukhulu.
Ecaleni kwegadi, indawo yomlilo idibanisa ngokugqibeleleyo kunye nethuba lokwabelana ngeebarbecue ezonwabileyo kunye nabahlobo ehlotyeni.
Isakhiwo sonke sigqibelele kuye nabani na okhangela ikona yoxolo, indawo yokusebenza ngendlela ekhululekileyo nethuleyo, isiseko esamkelekileyo ngoko ukwazi imihlaba emihle ekufutshane yeProsecco d.o.c. okanye izixeko zobugcisa ezifana neVenice okanye iTreviso ezikumgama weekhilomitha ezimbalwa.
Ubumelwane apho i-attic idityaniswe ne-villa yindawo ethule kakhulu kwaye igcinwe kakuhle. Amakhaya aseleyo kule ndawo aneegadi ezinkulu ezigcinwe kakuhle. Kwangaxeshanye, iziko likumgama weekhilomitha ezi-2 kuphela, kwaye nje kwi-300vi kukho ivenkile enkulu kunye nesikhululo sebhasi. Ummandla mkhulu ngokwenene.
Ndiya kufumaneka rhoqo, iindwendwe ziya kuba nabafowunelwa bam ngokuthe ngqo kwaye ziya kukwazi ukuqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha ngayo nayiphi na imfuno okanye amathandabuzo anokuthi avele.